Tag: laza malaza | Martech Zone
Tag: laza malaza
Ny fomba nanimbako ny laza nataoko tamin'ny haino aman-jery sosialy… sy ny zavatra tokony ianaranao avy amin'izany
Alatsinainy 22 Febroary 2021 Talata, Febroary 23, 2021 Douglas Karr
Raha efa nahafinaritra ahy ny nihaona taminao manokana, dia matoky aho fa ho hitanao ho olona, ​​vazivazy ary mangoraka aho. Raha mbola tsy nifankahita taminao manokana aho, matahotra aho sao mety ho hevitrao momba ahy aho noho ny fisian'ny media sosialy. Olona mafana fo aho. Liana amin'ny asako, ny fianakaviako, ny namako, ny finoako ary ny politika aho. Tena tiako ny fifampiresahana amin'ireo lohahevitra ireo… ka rehefa media sosialy